Iimali zedijithali ezithembisayo kakhulu ngo-2020. Iimali zedijithali ezinenzuzo kakhulu ukutshala imali, iindleko zemali zedijithali ezikhulayo ngokukhawuleza ukuzithenga ngoku.
Iiprogram ezili-10 eziphezulu kakhulu ezithembisa idijithali, eziye zakhula ngexabiso kwinyanga yokugqibela.
Iimali zedijithali ezinenzuzo kakhulu
Ukukhula kwamaphesenti kwinyanga
Wing (WING) 6 793 975 %
onLEXpa (onLEXpa) 4 262 %
Qitmeer (QITMEER) 2 702 %
NFX Coin (NFXC) 2 528 %
Trollcoin (TROLL) 2 504 %
Maya Preferred 223 (MAPR) 2 050 %
GlobalBoost-Y (BSTY) 1 715 %
Rowan Token (RWN) 1 702 %
Meme (MEME) 1 654 %
Community Token (COM) 1 578 %
Eyona nto ithembisa kakhulu yi-imali yedatha yinkonzo ye-cryptoratesxe.com yewebhusayithi ebonisa ii-imali yedatha eziphezulu kunye neenzuzo eziphezulu kwiinyanga ezi-3 ezidlulileyo.
Inkonzo ye-Intanethi kwi-intanethi Ininzi yemali yedijithali ethembisayo isebenzisa imithombo evulekile evela kwi-imali yedatha exchanges kwaye iqulunqa umlinganiso wokuthembisa i-imali yedatha ngokubhekiselele kutyalo-mali lwexesha elifanelekileyo.
I-imali yedatha ethembisayo ithathelwa ingqalelo ukuba ibonisa ukukhula okuzinzileyo kunye nokukhula rhoqo kwinqanaba. Ngokusekwe kwi-dynamics yokukhula, ukuzinza kokukhula kwayo kunye nobungakanani benzuzo efunyenweyo kutyalo-mali lwemali ye-crypto, sihlanganisa lo mlinganiso we-TOP.
Eyona nto ithembisayo ye-imali yedatha 2020
Eyona nto ithembisayo ye-imali yedatha ye 2020 yinkonzo yethu yasimahla ye-Intanethi ebonisa ezona zinto zikuthembisayo 2020.
Ukhetho lwe-crypto ethembisayo ingena 2020, kodwa sivavanya iinyanga ezi-3 zokugqibela zexabiso lokutshintsha kwemali. Amanqanaba otshintshiselwano kunye namandla ereyithi ayitshintsha mihla le kwaye ke olona mgangatho wethu mkhulu "Ininzi yemali yedijithali ethembisayo 2020" inokutshintsha yonke imihla.
Ukukhula kwee-imali yedatha ngenzuzo ephezulu.
Ukukhula kwee-imali yedatha ngenzuzo ephezulu-isampulu yazo zonke i-imali yedatha ngokwamandla abo. Ukukhula kwee-imali yedatha ngenzuzo ephezulu kuhlaziywa kuthi ukuba kuqokelelwe udidi oluphezulu lwee-imali yedatha ezithembisayo.
Sinquma inzuzo ye-crypto ngexesha: utshintsho kumanani abo kwiinyanga ezintathu ezidlulileyo.
Inzuzo ephezulu ye-imali yedatha imiselwe nje - ingakanani i-imali yedatha nganye inyuke ngexabiso ngaphezulu kwexesha elihlalutyiweyo.
Eyona mali inenzuzo enkulu ye-cryptocurrensets yinkonzo yethu, eyona nto iphambili kwi-Intanethi ye-imali yedatha ezisa inzuzo ephezulu ukuba uyithenga kwaye uyithengisa emva kwexesha elithile, i.e kakhulu inzuzo.
Phezulu kweyona mali inenzuzo enkulu ibalwa kwiinyanga ezi-3, kodwa ungazihlaziya kwelinye ixesha.
I-crypto enenzuzo ixabisekile ngokunxulumene nedola yaseMelika. Sicinga ukuba sathenga i-crypto ngedola yaseMelika, kwaye emva kwethuba sayithengisa ngeedola. Yeyiphi i-imali yedatha eya kufumana imali ephezulu kule meko yeyona nto inenzuzo kakhulu kwi-imali yedatha.
Itheyibhile yezona mali zininzi zee-imali yedatha.
Itheyibhile yeyona mali inenzuzo enkulu ye-imali yedatha - ibonisa ukubonakalisa kwethu ireyithingi ephezulu kakhulu ye-crypto.
Kwitheyibhile yeyona mali inenzuzo enkulu ungabona igama le-imali yedatha kunye nenqanaba lokukhula kwayo ngepesenti inyanga.
Xa unqakraza kwenye yezona mali zinenzuzo kakhulu kwitheyibhile, uza kubona ukonyuka okuthe chatha kwezinga le-crypto kule nyanga iphelileyo.
Itshati yeyona nto ibaluleke kakhulu kwi-imali yedatha.
Eyona tshati inenzuzo kakhulu yetshathi ye-imali yedatha sesinye isixhobo esimahla se-Intanethi esibonisa umgangatho ophezulu weyona mali ibonakalayo.
Itshathi yeyona mali inenzuzo enkulu yee-imali yedatha ibonisa amandla amaxabiso ezi-10 ezibalaseleyo zokufumana i-cryptos.
Ukwenza lula umbono, iigraphos zeekristin ezahlukeneyo zivezwa ngemibala eyahlukeneyo.